थपिए ४३ ६४ कोरोना संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति थपिए संक्रमित ? [विवरणसहित] – Rapti Khabar
थपिए ४३ ६४ कोरोना संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति थपिए संक्रमित ? [विवरणसहित]
असोज २२, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबार २ हजार ५ सय ४० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका २०८५, ललितपुरका ३२०, तथा भक्तपुरका १३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण तीब्र गतिमा बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४ हजार ३ सय ६४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यीसहित हालसम्म देशभर संक्रमित हुनेको संख्या ९८ हजार ६१७ पुगेको छ।
त्यस्तै यस अवधिमा २ हजार ६७५ जना कोरोनाबाट निको भएका छन् । यीसहित हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या ७१ हजार ३४३ पुगेको छ ।
देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६८४ रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
यस दिन थप १२ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । यीसहित हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ सय ९०पुगेको छ।
भक्तपुर घटना अपडेट: सडेको अवस्थामा श’व, घटना रह’स्यमयी, प्रहरी के भन्छ ?
Posted on September 11, 2020 Author Rapti Khabar
ईश्वरकाजी खाइजू/भदौ २६, भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका-९ निकोसेरास्थित एक घरमा एकैपरिवारका तीनजना मृ’त फेला परेका छन्। घरमा पालिएको कुकुरसमेत म’रेका अवस्थामा भेटिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार घरधनी ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, उनकी श्रीमती ३४ वर्षीया सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय छोरा सुशान्त अधिकारी मृ’त भेटिएका हुन्। तीनवटै श’व स’डेर फुलेको अवस्थामा […]
आज २०७७ भदौ २६ गते शुक्रबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७७ भदौ २६ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज नयाँ कार्य, रोजगार वा […]
कुकुरबाट गरिएको कोरोना परीक्षण नतिजाले देखायो यस्तो चमत्कार
Posted on September 27, 2020 Author Rapti Khabar
असोज ११, काठमाडौँ । फिनल्यान्डको हेल्सिन्की एयरपोर्टमा कुकुरहरूबाट गरिएको कोरोना भाइरस परीक्षण नतिजा ‘लगभग शतप्रतिशत सही आएको’ अनुसन्धाताहरूले बताएका छन्। हेल्सिन्की एयरपोर्टले तालिमप्राप्त कुकुर प्रयोग गरेर कोरोना परीक्षण सुरू गरेको हो। ती कुकुरले यात्रुको पसिनाको गन्ध सुँघ्छन् र त्यसै आधारमा संक्रमण छ कि छैन पत्ता लगाउँछन्। कुकुरबाट हुने कोरोना परीक्षण अनुगमन गरिरहेको हेल्सिन्की विश्वविद्यालयकी आना […]
जाजरकोट जीप दुर्घटनाः आफन्तले श’व बुझेनन्, चालकको घर र पसलमा लगाइदिए आगो
हात वा छालामा कोरोना कति समयसम्म बाँच्छ? यसो भन्छ नयाँ अध्ययन